गर्मी मौसममा यसकारण बढ्छ क्रोध « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 May 9, 12:45 pm
एजेन्सी, २६ बैशाख । गर्मी र क्रोध यी दुईको एकअर्कासँग गहिरो सम्बन्ध छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा तपाईंको रिस पनि बढ्न सक्छ।
अमेरिकाको एरिजोना रिसर्च सेन्टरले गरेको एक अध्ययनमा उच्च तापक्रमका कारण मानिसहरु क्रोधित हुने र सडकमा बढी हङकिङ गर्न र आपसमा झगडा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
अर्को अमेरिकी अनुसन्धानले तापमान वृद्धिका कारण हिंसा ४ प्रतिशत र सामूहिक हिंसा १४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । स्पेनमा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेर ७.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
गर्मीमा मानिसको शरीरमा तनाव हर्मोन बढ्ने डाक्टरहरुको भनाइ छ । तनाव हर्मोनलाई कोर्टिसोल पनि भनिन्छ। जाडोमा कोर्टिसोलको स्तर कम रहन्छ, तर गर्मी बढ्दै जाँदा शरीरमा कोर्टिसोलको स्तर बढ्दै जान्छ। यसले शरीरलाई हानि पु¥याउँछ।
गर्मीले मस्तिष्कमा असर गर्छ। जब मस्तिष्कले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र हाइड्रेशन प्राप्त गर्दैन, यसले प्रतिक्रिया गर्दछ र परिणामस्वरूप हामी अवसाद, तनाव, क्रोध महसुस गर्छौं।
आयुर्वेद र परम्परागत चाइनिज मेडिसिनका अनुसार पोषण र खानाले तपाईको मुडलाई असर गर्छ । कुन खानाले तपाईको रिस बढाउन सक्छ र तपाईको रिसको कारण बन्न सक्छ।
कफी– मानिसहरु प्रायः कसरत गर्न र थकान कम गर्न कफी पिउने गर्छन्। कफी पिएर तपाईलाई उर्जा मिल्छ। यसमा क्याफिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उच्च ऊर्जाको कारणले मस्तिष्कलाई गति दिन्छ र क्रोध बढाउन सक्छ। त्यसैले धेरै कफी नपिउनुहोस्।
टमाटर– आयुर्वेदका अनुसार टमाटरको प्रभाव तातो हुन्छ । यस कारण, यो क्रोधको कारण बन्न सक्छ।
मसलादार खाना – यसले शरीरमा गर्मी बढाउँछ । यदि तपाईको शरीरमा पहिले नै गर्मी छ भने, मसलादार र भारी खाना नखानुहोस्।
गहुँ र दुधजन्य पदार्थ – गहुँ र दुधजन्य पदार्थमा क्यासिन पाइन्छ, जसले रिस बढाउँछ । त्यसैले गहुँ र दुग्धजन्य पदार्थ थोरै मात्रामा मात्र लिनुहोस्। एम्सका मनोचिकित्सा विभागका प्राध्यापक डा राजेश सागरका अनुसार अत्यधिक मौसमले मानिसको स्वभावलाई असर गर्छ । आद्रता र गर्मीका कारण गाडी चलाउँदा जलन हुन्छ । जसका कारण यदि कसैले तपाईंको कार वा मोटरसाइकलसँग ठक्कर खायो वा लामो समयसम्म ट्राफिकमा बस्नुप¥यो भने व्यक्तिलाई रिस उठ्न थाल्छ। कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो शीतल गुमाउँछ र बाटोमा झगडा हुन्छ।
रिस उठ्दा के हुन सक्छ ?
सम्बन्ध बिग्रन सक्छ।
केही समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ।
उत्पादनमूलक काम गर्न सकिँदैन ।
मन दिनभर ठिक हुँदैन ।
तपाईं महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न बिर्सन सक्नुहुन्छ।
खाना खान मन लाग्दैन ।
शरीरमा उर्जा हुँदैन ।
स्वास्थ्य बिग्रन्छ ।
अरुसँग कुरा गर्न मन लाग्दैन ।
रिस उठ्यो भने कसरी घटाउने ?
काउन्टडाउन काउन्टडाउन गर्नुहोस्, यसले क्रोध नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
ठाउँ परिवर्तन गर्नुहोस्, अर्थात्, आफूलाई ताजा महसुस भएको ठाउँमा घुम्न जानुहोस्।
बिहान र बेलुका हिड्ने प्रयास गर्नुहोस्, यो राम्रो हुनेछ।
दिनमा कम्तीमा एक पटक ध्यान गर्नुहोस्, यसले दिमागलाई शान्त राख्छ।
ढिलो र गहिरो सास लिनुहोस्, तपाइँ यो ध्यान को समयमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
कम स्वरमा आफ्नो मनपर्ने गीत सुन्नुहोस्, तपाईं सकारात्मक महसुस गर्नुहुनेछ।
राति राम्रो निद्रा लिनुहोस्, यसले रिस कम गर्छ।